တားမြစ်ထားသော Tech SATIS 2014 ကုန်ပစ္စည်းကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်း NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » တားမြစ်ထား Tech မှ SATIS 2014 ကုန်ပစ္စည်းကို Preview
ရပ်မှာ SATIS 2014, နိုဝင်ဘာ 18-20 မှာတားမြစ်ထား Technologies က plc သွားရောက်ကြည့်ရှု A45
SATIS 2014 မှာတားမြစ်ထား:
ယင်းမှနယူးမြှင့်တင် Forscene cloud-အခြေခံပြီးဗီဒီယို Post ကို-ထုတ်လုပ်မှုပလက်ဖောင်း
SATIS 2014 အောက်ပါသစ်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည် Forscene အများဆုံးအသုံးပြုသူများထံမှတုံ့ပြန်ချက်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု:
* နယူး Forscene user interface ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ခံစား (2014 လဲကြ)
* အမြင့်-res codec high- သို့မဟုတ် Low-res proxy ၏ပြောင်းလဲနေသော display ကိုဖွကြောင်း
* ကို iOS (R) နှင့်အန်းဒရွိုက် (TM) Forscene apps များ
(beta ကိုအတွက်) * မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်) စနစ်
တဦးတည်းထံမှမူရင်း source ကို၏ * လပ်ြရြားမြ Forscene အခြားမှဆာဗာကို
* Multicam သစ်ထုတ်လုပ်ရေး, 18 ကင်မရာများမှတက်ကိုထောကျပံ့ဖို့တိုးချဲ့
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: နယူး Forscene interface
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Forbidden/Forbidden-NewForsceneInterface.jpg
Forscene အိုင်ပက် (R) အတွက်
ဒါ့အပြင်အသစ်အ SATIS 2014, အများအတွက် Forscene app ကိုအိုင်ပက် (R) အသုံးပြုသူများနှင့်အတူချိတ်ဆက်မှုအတွက်ကိရိယာတခုပေးသည် Forscene သွားလာရင်းမိုဃ်းတိမ်သည်။ Forscene iPad အတွက်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောနိဒါန်းဖြစ်ပါသည် Forscene - သုံးစွဲသူများကလစ်ပ် tag ကြမ်းတမ်းဖြတ်တည်းဖြတ်လုပ်ဆောင်ပါနှင့်ဗီဒီယိုအပိုင်းများကို upload နှင့် download, လွယ်ကူအတွက်အပြည့်အဝတည်းဖြတ်ရေးအတွက်ဗီဒီယိုကိုပြင်ဆင်ထားရန်အောင်နိုင်ပါတယ် Forscene သို့မဟုတ်အခြား nonlinear တည်းဖြတ်ရေးစနစ်များကို။ ရှေ့ဆက်အချိန်ဒီပြင်ဆင်မှုလုပ်နေပိုမိုထိရောက်သောနည်းအကုန်အကျတစ်ခုလုံးကို Post-ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုမှန်ကန်စေသည်။
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Forscene အခုတော့ iPad ကို (R) အတွက်
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Forbidden/Forbidden-iPadatStation.jpg
Forscene ယခုအသစ်နှစ်ခုကိုမိတ်ဖက်ရှိပါတယ်, 1 နှင့် Timecode လုပ်ပြီး Buddy ကို ယူ. အသုံးပြုသူများထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲပိုပြီးလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီ Forscene ပတ်ဝန်းကျင်။
အကြားမိတ်ဖက် 1 ယူ. Forscene မှတ်တမ်းထုတ်လုပ်တစ်ခုအလိုအလျောက်ဖြစ်စဉ်ကိုလြှော့သိရသည်။ ထုတ်လုပ်သူများအတွက်အကြောင်းအရာကိုရွေးပါ Forscene ရိုးရှင်းစွာထို့နောက်ကူးရေးသောနှင့်ခံရဖို့ 1 ကိုယူမှ proxy ကိုဖိုင်တွေကိုပို့မယ့် button ကို click လုပ်ပါ။ 1 ထို့နောက်ချက်ချင်းကုမ္ပဏီရဲ့မြင့်မားတဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြား, ဖြန့်ဝေလုပ်သားအင်အားများကလုပ်ငန်းများ၌နိုင်သည့်အတွက်ကူးယူနိုင်ရန်, အားလက်ခံတွေ့ဆုံယူပါ။ ပြီးစီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ထိုမှတ်တမ်းကိုပြန်သို့တင်သွင်းနေသည် Forscene တစ်ဦးက XML ဖိုင်အဖြစ်ကအတွင်းမာစတာဗီဒီယိုနောက်ကျောနှင့်ဆက်စပ်ရရှိနိုင်အောင် Forscene မိုဃ်းတိမ်ကို။
နောက်တစ်နေ့မိတ်ဖက် Timecode လုပ်ပြီး Buddy နှင့်အတူဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူများကိုအတွက်အရေးကြီးသော metadata ကိုဖမ်းယူကူညီပေးသည် Forscene ထုတ်လုပ်မှု၏အလွန်စတင်ထံမှသေချာ metadata ကိုအဆိုပါလုပ်ငန်းအသွားအလာတလျှောက်လုံးညှိခြင်းနှင့်ရှာဖွေလျက်ရှိသည်အောင်နေစဉ်။ အဆိုပါ Timecode Sync ကို plugin ကိုအတူ, MovieSlate အသုံးပြုသူများကိုမြှင့်တင်နိုင် SMPTE အဆိုပါအလွန်တိကျမှန်ကန် Timecode လုပ်ပြီး Buddy system ထဲကနေ, အစစ်အမှန်အချိန်အတွက် Wi-Fi ကိုကျော်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရဲ့ timecode ။ ဤသည်မှာရိုက်ကူးမှတ်တမ်းသတင်းအချက်အလက်် MovieSlate မှတ်စုမီဒီယာကိုယ်တိုင်ကကဲ့သို့တူညီသော timecode ကိုးကားဆိုလိုသည်။ ၏ရလဒ်အဖြစ် Forscene သူတို့သို့တင်သွင်းနေသည့်အခါပေါင်းစည်းမှုသည် MovieSlate ရိုက်ကူးမှတ်စုထို့နောက်အလိုအလျောက်မီဒီယာမှပြန်လင့်ထားသည် Forscene။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုထုတ်လုပ်သူများအတွက်အလုပ်စတင်ကြောင်းသေချာ Forscene ပြီးသားအသေးစိတ်မှတ်တမ်းများတည်ဆောက်ရန်ရာမှအချို့အခြေခံမှတ်စုရှိသည်။ အားလုံးအချက်အလက်များကိုတစ်လျှောက်လုံးပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါသည် Forscene အစာရှောင်ခြင်းစုဝေးတည်းဖြတ်ရေးဘို့ခွင့်ပြုရှာဖွေ metadata ကိုအဖြစ်လုပ်ငန်းအသွားအလာ။
"ဒီ SATIS မှာပြကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်ပျော်ရွှင်နေကြသည်, Forsceneပြင်သစ်ဈေးကွက်ရန်။ တစ်အသစ်စက်စက် interface နဲ့သစ်ကိုစွမ်းရည်နှင့်ပေါင်းစည်းမှုများဟာ host featuring, Forscene ရရှိနိုင်အရှိဆုံးနိုင်စွမ်းမိုဃ်းတိမ်ကိုတည်းဖြတ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်၏။ "
- Greg Hirst, စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးဒါရိုက်တာတားမြစ်ထား Technologies က plc
တားမြစ်ထားတဲ့မီဒီယာချမှတ်သူများနှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် high-performance ကိုမိုဃ်းတိမ်ကိုဗီဒီယိုကန်ဆောင်မှုကယ်တင်တတ်၏။ သူ့ရဲ့ flagship ထုတ်ကုန်, Forscene, ဖြန့်ဝေဖို့ဖန်တီးမှုကနေလုံးဝအသစ်အ Workflows powering, ကမ္ဘာ့အများဆုံးအဆင့်မြင့် cloud-based ကိုဗီဒီယို Post-ထုတ်လုပ်မှုပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်ကိုးကား, High-profile ကိုမီဒီယာနှင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီများနှင့် Forbidden မိတ်ဖက်ယင်း၏မိုဃ်းတိမ်သည်အခြေခံအဆောက်အဦများဖြည့်နှင့်၎င်း၏ဖောက်သည် သာ. ကြီးမြတ်တန်ဖိုးနှင့်ထိရောက်မှုများကို။
တားမြစ်ထားအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက www.forbidden.co.uk မှာတှေ့နိုငျပါသညျ။ အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက Forscene www မှာတှေ့နိုငျပါသညျ။forscene.co.uk ။
အကြောင်းအရာ ပိတ်ပင်ထားသော FORscene post ကိုထုတ်လုပ်မှု SATIS 2014 2014-10-30
ယခင်: ဗီတာမင်ရုပ်ပုံများ Knott ရဲ့ကြောက်စရာလယ်ယာများအတွက်ထိတ်လန့်ရလာဒ်တွေတင်
နောက်တစ်ခု: Primestream CCW 2014 ကုန်ပစ္စည်းကို Preview